Su’aal: Waa maxay masiixi?
Jawaab: Diiwaan qeexidda masiixigu waa wax la mida ah (waa qof qiraya rumayn inuu ciise yahay masiixiga, ama diin ku saleysan baritaanka ciise, Iyadoo ay sedani tahay bilaw fiican, sida diiwaanno badan sharaxoodo yahayba, wey ka hooseeyaan runta baybalka iyo waxa ay tahay masiixinimadu. Kalmadda Masiixi, saddex goor/jeer baa lagu isticmaalay testameentiga cusub (Acts 11:26; 26:28’ 1 peter 4:16). Dadkii raacay Ciise waxaa markii hore loo baxshey, Masiixiyiin oo “Antioch” (Acts 11:26) maxaa yeelay dhaqankoodi, ficilkoodii iyo hadalkoodiiba wxay la mid noqdeen masiix.. Kalmada Masiix macnaheedu waa : ka mid ahaansho xisbiga masiix, ama taabacsani/raace/taageeri masiix.
Nasiib darro, muddo ka dib, kalmadda Masiixi waxay lumisay in badanoo qiimaheedii ah, waxaana marar badan loo isticmaalaa qof mutadayin?diinle ah oo sharaf ama qiimo leh oo runtii taabacsan ama taabacsaneyn ciise masiix.. Dad badan oon rumayn ama aaminin Ciise Masiix baa waxey isu haystaan masiixiyiin, maxaa yeelay waxay aadaan kineesadda, ama waxay ku nool yihiin dal masiixi ah, Laakiin kiiniisad aadidu, wax u qabasho kuwo kaa liita, ama ahaansho qof fiican kaama dhigeyso masiixi Aadid keniisaddu kaama dhigeyso masiixi, sida haddaad garaash aadid aaysan baabuur/gaari kaaga dhigeyn.. Ka tirsanaan keniisu, tegidda cibaadooyinkeeda si joogta ah, iyo wax siinta hawlaha kiniisadda kaa dhigimayaan masiixi.
Baybalku wuxuu na barayaa in shaqooyinka wanaagsan oo aan sameynaa uusan alle nago aqbali Karin. Titus 3:5 wuxuu leeyahay, nooma badbaadin ilaahey waxyaalo saxa oo aan sameynay darted ee wuxuu noo badbaadiyey naxariistiisa darted. Wuxuu nagu badbaadiyey mayridda/dhaqidda dib u dhalashada iyo cusbooneynta ruuxa barakeysan; marka masiixi waa qof u ilaah dib u dhaliyey (John 3:3; John 3:7; 1 Peter 1:23) oo rumeeyoo, aaminey ciise Masiixi Ephesians 2:8 wuxuu noo sheegayaa, in nalagu badbaadiyey sarreynta, caqiiddo darted, adigana kaama iman, waa hadiyad ilaahay.
Masiixiga runta ahi waa qof rumeeyay oo aaminey qof ahaanta iyo shaqada Ciise Masiixi oo ay ka mid tahay, ku dul dhimashadiisii macatabka si uu u mago danuubtayadii, iyo dib u soo noolaantiisii saddex maalmood ka dib. John 1:12 wuxuu noo sheegayaa, weli inta isaga heshay, kuwa ku aaminey magiciisa, wuxuu siiyey xaq ay ku noqdaan carruurtii ilaahay.
Callamadda masiixiga runta ah waa jacaeyl kuwa kale, iyo addeecidda kalmadda ilaahay (1 John 2:4,10) Masiixiga runta ahi runtii waa ilmo ilaahay, qayb ka mid ah qoyska runta ah oo ilaahay, iyo mid la siiyey nolol cusub oo ciise masiix.
Miyaad go’aan masiixi ka gaartey waxaad halkan aqrisay darted? Haddey saas tahay fadlan riix badhanka hoose oo oranaya, waan aqbalay/yeelay masiixi maanta.